27 "Kutaridzika kwekuratidzira kwakawedzerwa kune 'mazambiringa' rondedzero | ndinobva kuMac
27 ″ Kutaridzika kwekuratidzira kwakawedzerwa kune 'vintage' runyorwa
Zvigadzirwa zveApple zvinowedzerwa kune chinyakare kana vhezheni runyorwa kana makore mashanu kusvika manomwe apfuura kubva pavakarega kutengesa. TOpple yakaunza iyi 27-inch Thunderbolt Ratidza muna 2011 uye kubva panguva iyoyo hapana chimwe chaizivikanwa, hatina kumboona yakagadziridzwa modhi.
Sezvatinoziva tose Kuwedzera zvigadzirwa izvi kune vevhegi runyorwa hazvireve kuti vanomira kushanda, kure nazvo.Iyo ingori nzira yekureva kuti Apple haiburitse zvidzoreso zvechigadzirwa ichi panguva ino uye kuti pamwe kana paita dambudziko tinofanirwa kurasa tarisa sezvo isingapi basa rehunyanzvi hwehunyanzvi.
Muna June 2016 zvakamiswa zviri pamutemo kutengesa
Uye ndeyekuti Apple skrini akamira kutengeswa muzhizha ra2016 uye gare gare, iyo Pro Ratidza XDR skrini yakasvika neMac Pro muna2019. Iyi yekupedzisira yekutarisa haina chekuita neye modhi yakamiswa nhasi nekambani yeCupertino. Chero zvazvingaitika, icho chimwe chigadzirwa chakawedzerwa kune urwu runyorwa rwezvigadzirwa izvo zvisinga gashirwe nerutsigiro rwepamutemo kubva kufemu.
Parizvino hazvizivikanwe kuti Apple ichasarudza kuvhura skrini nyowani, chiri pachena ndechekuti izvozvi skrini hadziwanikwe kune wese munhu uye izvi zvine musoro nekuda kwemutengo wavo. Apple yakaverengerwawo mune urwu runyorwa rwechinyakare uye vintage iyo yekutanga iPad Mhepo ayo aive ekutanga emhando dzePad Mhepo dzakaburitswa muna2013. Shure kwaizvozvo, aya mamodheru ePad iPad akamira kutengeswa muna2016.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » 27 ″ Kutaridzika kwekuratidzira kwakawedzerwa kune 'vintage' runyorwa
Apple inogadzirisazve Apple Music yeVanyori webhusaiti
JJ Abrams anoti anonzwa rombo rakanaka kuti anokwanisa kushandira Apple TV +